Khaladaadka Codsiga Shaqada Iyo Sida Looga Fogaado (15 Qodob) - QaranJobs.com - Somali Jobs - somalijobs - qaranjobs - Daily Somalia Jobs
Home/Career Tips/Khaladaadka Codsiga Shaqada Iyo Sida Looga Fogaado (15 Qodob)
Markaad raadineyso shaqo, codsigaaga shaqadu waa qodob muhiim u ah shaqo-bixiye suurtagal ah inuu go’aamiyo ku habboonaanta doorkaasi. Barashada qaar ka mid ah caqabadaha guud iyo khaladaadka ku saabsan qorista codsiga shaqada ayaa kaa caawin kara inaad qorto warqad codsiyeed aad u soo jiidasho leh oo maamulayaasha shaqaalaysiintu ay doonayaan inay akhriyaan. Qormadan, ka baro 15 khalad oo ka mid ah khaladaadka ugu badan ee ay sameeyaan codsadaayasha shaqo iyo sida looga fogaado.
Maxaa ku jira codsiga shaqada?
Caadi ahaan, codsiga shaqada waxaa jiraa qaab guud oo lagu soo koobayo astaantaada xirfadeed, taariikhdaada shaqo, waxbarashadaada iyo wixii tabaruc ah ama khibrad shaqo ee aad leedahay.
Khaladaadka guud ee codsiga shaqada iyo sida looga fogaan karo
Liiska soo socdaa wuxuu iftiiminayaa khaladaadka codsiga shaqada ee ay fududahay in laga fogaado haddii aad raacdo nidaam qaldan waqtiga qorista codsiga shaqada, hubi khaladaadka naxwaha, sidoo kale ku dheji faahfaahinta ku habboon ama ku munaasibka ah booska aad codsaneyso
Qor ujeedada aad u qorayso codsiga shaqada halkii aad ka qori lahayd astaan xirfadeed
Khibrad shaqo oo aan la xiriirin
Ha bixin faahfaahin ku filan
Ha kudarin tixraacyo badan
Xirfadaha aan khusayn doorka shaqada
Isticmaalka codsiyo isku mid ah dhamaan codsiyadaada shaqo
Macluumaad xiriir ah oo waqtigiisu dhacay ama la waayey
Sharaxaadda waajibaadka shaqada halkii lagaa rabay guulaha xirfadeed
codsi shaqo oo aad u dheer ama aad u gaaban
Ciladaha naxwaha iyo qaabeynta
Adeegsiga cinwaan emayl oo aan xirfad lahayn
Codsi ay ku jiraan shuruudaha mushaharka
Eraybixin ama ereyga oo aad loo isticmaalay
Qorista hiwaayadaha aan shaqada la xiriirin
Ku dhejinta sawirkaaga
Hubso inaad ku darto astaan ​​xirfadeed oo kooban. Haddii aad leedahay khibrad shaqo oo xadidan, ku dar ujeedooyinkaaga xirfadeed oo la xiriiri sida ku guuleysiga himiladaada xirfadeed ay uga faa’iideysan karto shirkadda aad xiiseyneyso inaad u shaqeyso.
In kasta oo ujeeddooyinka codsiga shaqadu ay muhiim noqon karaan oo ay muujiyaan sida aad u dejiso yoolalka xirfadeed, hadana loo shaqeeyeyaasha suurtagalka ahi waxay raadinayaan waxa aad u qaban karto iyaga iyo sidaad kaalinta ugu habboonaan lahayd. Astaantaada xirfadeed waxay u adeegtaa ujeedadan. Codsiga shaqada ama ujeedo shaqeed kaliya waxay muujineysaa waxaad rajeynayso inaad ku guuleysato. Haddii ay waajib kugu tahay inaad ku darto ujeeddadaada xirfadeed, ku xir meheradda iyo sidaad u fuliso yoolalkaaga ay u khuseeyaan shaqada.
Khibrad shaqo oo aan lala xiriirin shaqada
Markaad qoraysid codsigaaga shaqada, qor khibradahaaga shaqo iyo xirfadahaagaba iyagoo si gaar ah ula xiriira jagada(shaqada) aad codsaneyso. Khibradaada shaqo waa inay soo bandhigaan xirfadahaaga iyo guulaha aad gaari karto, maamulaha shaqaalaynta adiga oo keenaya ururkooda. Haddii doorarkaagii hore ay u muuqdaan kuwo aan xiriir la lahayn, waxaad ka fiirsan kartaa liis garaynta kaliya xirfadaha iyo waxqabadyada la xiriiri kara shaqada halkii aad ka xallin lahayd dhammaan mas’uuliyadihii aad lahayd.
Tusaale ahaan, haddii aad codsaneysid doorka adeegga macaamiisha, laakiin waayo-aragnimadaadu waxay ku kooban tahay inaad u shaqeyso sidii lacag-haye, halkii aad ka qori lahayd faahfaahinta ku saabsan diiwaangelinta, waxaa muhiim ah inaad muujiso sida aad ula macaamishay macaamiisha.
Caadi ahaan, marka khibrada xirfadeed lagu qoro codsiga shaqada, waa inay ku jirtaa seddex illaa shan faahfaahin oo muujinaya sida aad ugu guuleysatay doorkaagii ugu dambeeyay. Marka lagu daro faahfaahin ka yar tan waxay sababi kartaa shaqo-bixiyaha suurtagalka ahi inuu fiiriyo taariikhdaada codsiga shaqada, iyada oo faahfaahinta aan caddayn laga yaabo inaysan siin karin caddayn ku filan oo muujinaya sababta aad ugu habboon tahay ururkooda. Tixgeli ereygaaga, adoo adeegsanaya ficil oo muujinaya waxa aad soo qabatay waxay kaa caawin kartaa inaad hubiso inaad bixiso macluumaad ku filan oo ku saabsan xirfadahaaga.
Ka dhaafida tixraacyadaada xirfadeed waxay sababi kartaa shaqo-bixiyeyaashu inay u gudbiyaan dalabkaaga, laakiin haysashada tixraacyo badan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan kara sida loo-shaqeeyahaagu u arko codsigaaga shaqada. Caadi ahaan, shaqo-bixiyeyaasha badankood waxay raadiyaan labo illaa saddex tixraac xirfadeed. Marka lagu daro tirada tixraacyada ku habboon, hubi in isku xirnaantaadu ay yihiin shaqsiyaad aad la falgashay ama aad kala soo shaqaysay goob xirfadeed.
Waxaad ku dari kartaa asxaabtii hore, kormeerayaasha ama macaamiisha kuwaas oo ku siin kara jawaab celin wanaagsan oo ku saabsan anshaxaaga shaqo ama macluumaad kale haddii loo-shaqeeyahaaga mustaqbalka uu la soo xiriiro. Intaa waxaa sii dheer, iska ilaali inaad u adeegsato tixraac xirfadeed qoyskaaga ama shaqsiyaadka aad taqaan. Sidoo kale, haddii aad ka tagayso qayb tixraac ah, iska ilaali inaad sheegto inaad siin doonto iyaga markii lagaa codsado. Hadalkani wuxuu u muuqan karaa mid aan ku xirnayn shaqo-bixiye macquul ah.
liis garaynta xirfadaha aan khusayn shaqada waxay sababi kartaa in maamulaha shaqaaleysiintuu uu oo iska indhatiraya dalabkaaga. Waad ka fogaan kartaa qaladkan adigoo ku daraya xirfadahaaga oo si toos ah loogu dabaqi karo doorka shaqada. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay xirfado kombuyuutar oo lagu dabaqi karo shaqada gelinta xogta, waxaad ku muujin kartaa taas codsigaaga shaqada. Taa bedelkeeda, haddii aad leedahay xirfadaha adeegga macmiilka laakiin aad codsanayso kaalin ahaan shaqaale wax soo saar halkaasoo xiriirka macmiilku uusan qayb ka ahayn shaqada, waa in aad ka tagto xirfadahaas.
Ha Isticmaalin codsi shaqo oo isku mid ah dhamaan codsiyadaada
Markaad gudbineyso codsiyada shaqada, waxaa muhiim ah inaad qaabeyso codsigaaga shaqada si ay toos ula xiriirto shaqada aad codsaneyso. Haddii hadii aad shaqooyin dhowr ah aad u isticmaasho codsi shaqo oo isku mid ah, dalab kasta oo shaqo oo aad soo gudbiso waxaad u muuqan kartaa caajis ama dan kama lihid shaqada. Waad ka fogaan kartaa qaladkan adoo hagaajinaya codsigaaga shaqada si aad ugu habboonaato sharraxaad shaqo kasta, Tan macneheedu waxay noqon kartaa xoogaa inaad waydo shaqooyinkaas, laakiin qorista codsi shaqo oo bartilmaameed ah waxay u oggolaan kartaa shaqo-bixiyeyaasha suurtagalka ah inay si dhab ah u helaan si dareen leh sida aad ugu habboonaan karto booska.
Macluumaad xiriir oo waqtigiisu dhacay ama la waayey
Hubso in dhammaan macluumaadka xiriirkaagu ay yihiin kuwo cusub. Lambarka taleefankaagu waa inuu ahaadaa mid la gaari karo, cinwaankaaguna waa inuu noqdaa meesha aad hadda deggan tahay. Haddii aad dib u eegto codsi shaqo oo hore in muddo ah, hubi oo dib u eeg macluumaadkaaga xiriirka si aad uga tarjumeyso wixii isbeddel ah ee aad sameysay tan iyo markii aad guurtay ama aad beddeshay sida taleefannada gacanta.
Sharaxaada waajibaadka shaqada halkii lagaa rabay guulaha xirfadeed
Shaqooyinka waa lala wadaagi karaa dhinacyada la xiriira, laakiin waxaad ku guuleysatay waa dadaal xirfadeed oo u oggolaan kara loo shaqeeyayaasha inay arkaan sida aad uga faa’iideynayso shirkaddooda iyo sidoo kale sida aad ugu heellan tahay shaqadaada. In kasta oo aad ku soo dari karto shaqo gaar ah oo khuseysa ama shaqo aad mas’uul ka ahayd, ku xir faahfaahintaas guul gaar ah oo tusi karta maamulaha shaqaalaynta sida waxqabadkaaga shaqada uu si toos ah u saameyn ugu yeeshay ugana faa’iideystay shaqo-bixiyeyaashii hore.
Codsiga shaqadu guud ahaan waxay ku fiican yihiin hal ama laba bog ugu badnaan, sidaas darteed midkood inuu ahaado mid aad u gaaban ama dheer wuxuu saameyn xun ku yeelan karaa sida shaqaaleeye suurtagal ahi uu kuu arko. Haddii aad leedahay taariikh shaqo oo ballaadhan, waxaad ku qaabayn kartaa codsigaaga shaqada laba bog ama wax ka yar, laakiin haddii aad tahay qof qalin-jabiye cusub ama khibrad xirfadeed oo xaddidan leh, waxay noqon kartaa mid wax ku ool ah inaad ku ekaato hal bog.
Waa lagama maarmaan in la hubiyo oo la saxo wixii higgaadin ah, naxwaha ama ciladaha kale ee jira ka hor inta aanad gudbin codsigaaga shaqada, waxaad u baahantahay inaad hubiso inaad qaabeyntaada u qaabeysay qaab xirfadeed, khadad nadiif ah iyo farshxan cad oo la akhrin karo, iyo sidoo kale inaad hubiso inaadan codsigaaga shaqada u qorin qoraalkaaga si aad u faahfaahsan. Waxa kale oo aad ka fogaan kartaa midabada dhalaalaya ee ka qaadi kara diiradda waxyaabaha ku jira codsiga shaqada. Tixgeli font aasaasiga ah sida Times New Roman ama Arial, oo ku dhaji khad madow. Baarayaasha Naxwaha ee aad u dirto si ay kaaga hubiyaan ayaa kaa caawin kara inaad hubiso in codsigaaga shaqadu uu diyaar u yahay inuu soo diro.
Adeegsiga cinwaan emayl oo aan xirfadleh ahayn
Adeegso cinwaan emayl u eg xirfad-yaqaan, sida mid ku qoran magacaaga hore iyo kan dambe ama magac xaqiiqo ah leh. Cinwaanka e-maylka aan xirfad lahayn wuxuu noqon karaa mid aan habboonayn haddii uu ku ciwaankaaga kamuuqdo luuqad cay ama daandaansi ah. Haddii aadan wali sameysan cinwaan emayl u eg xirfad-yaqaan, waa inaad tixgelisaa inaad sidaas sameysid kaliya si ay kuugu soo diraan codsiyadaada shaqo. Markaad ku darto cinwaanka emaylkaaga xirfadeed ee cusbooneysiisay, codsigaaga shaqadu wuxuu u muuqan doontaa mid rasmi ah oo xirfadleh.
Waxaa laga yaabaa inaad raadineysid nooc mushaar ah oo gaar ah, hase yeeshe, ha ku darin faahfaahintaan codsigaaga shaqada, sababtoo ah ma noqon karto xulasho wax ku ool ah. Haddii aad sidaa sameysid waxay damin kartaa shaqo-bixiye ama waxaaad ku waayi kartaa tartankaasi, gaar ahaan haddii aysan ku siin karin inta aad raadineyso ama aanay iyagu codsan mushaharkaaga inaad soo qorto. Habka ugu haboon ee looga hor tagi karo qaladkan ayaa ah inaad uga tagto codsigaaga shaqada gebi ahaanba. Mushaharka waxaa badanaa laga wada hadlaa inta lagu jiro wareysiga ama warqada cover letterka ah gudaheeda, sidaas darteed waxay noqon kartaa fikrad fiican inaad ka dhaafto shuruudaha mushaharka ee ku jira codsigaaga shaqada.
Eraybixin ama ereyga oo dhowr jeer la isticmaalo
Sida bixinta liis aan dhammaad lahayn ee waayo-aragnimada shaqada iyo xirfadaha ay u noqon karto mid aan loo baahnayn oo halis u ah luminta dareenka loo-shaqeeyaha, adeegsiga ereyada soo noqnoqda waxay wax u dhimi kartaa macluumaadka aad isku dayeyso inaad sharaxdo. Ku dhaji ereyo ficil ah oo tusi kara loo shaqeeyaha waxaad u jeeddo, iskana ilaali inaad adeegsato weedho jumlad ah iyo ereyo waqtigoodu dhacay oo laga yaabo inay ka saaraan diiradda sida aad ugu habboonaan karto shaqada aad codsanayso.
Qorista hiwaayadaha (Hobbies) aan shaqada la xiriirin
hiwaayadahaagu hala xidhiidhi karaan doorka shaqada, sida kaqeybgalka hawl qabadka urur aan faa’iido doon ahayn, wax akhris, fagaare kahadal ama kubad ciyaarid ayaad ku dari kartaa qayb kooban oo tusaysa.
In kasta oo looshaqeeyayaasha qaarkood ay u arki karaan wax la aqbali karo in lagu daro madax ama kurka codsigaaga shaqada sida shaqooyinka jilitaanka ama moodeelka. waxaa laga yaabaa inaysan dantaadu ku jirin in lagu daro sawirkaaga codsiga shaqada. Kaliya maahan inuu sawir qaadan doono boos, laakiin sidoo kale wuxuu halis u yahay loo shaqeeyeyaasha inay ka gudbaan arjigaaga si ay uga fogaadaan sawirka muuqaalka ah. Loo-shaqeeyayaashu waxay caadi ahaan ku dhaafi karaan codsi shaqo oo bilaa sawirr ah maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaysan rabin inay khatar ugu jiraan in loo tarjumo midabtakoor ku saleysan muuqaalka.
In kasta oo khaladaadkan caadiga ah laga yaabo in si fudud loo saxo, waxaad ka fiirsan kartaa in saaxiib ama xubin qoyskaaga ka mid ah lagu dul akhriyo codsiga shaqada si loo hubiyo inaad ka fogaatay wixii khalad ah. Sidan, waxaad ku hubin kartaa inaad gudbineyso nooca ugu xirfada badan ee codsigaaga shaqada.
Xuquuqda Qoraalka: Somalijobs INC.